Ntọala nke Usoro Ọrịre Na-aga nke Ọma | Martech Zone
Inbound vesos na mgbe ọ bụla yiri ka ọ bụ arụmụka nke na-aga n'etiti ahịa na ahịa. Oge ụfọdụ ndị isi n’ire ahịa na-eche nanị ma ọ bụrụ na ha nwere ọtụtụ mmadụ na ọnụọgụ ekwentị ọzọ na ha nwere ike ịmekwu ahịa. Ndị ahịa na-echekarị na ọ bụrụ na ha nwekwuru afọ ojuju na nnukwu ego iji bulie ha, na ha nwere ike ịrekwu ahịa. Ha abụọ nwere ike ịbụ eziokwu, mana ọdịbendị nke ire ahịa B2B agbanweela ugbu a na ndị na-azụ ahịa nwere ike ịme nyocha niile ha chọrọ n'ịntanetị. Nkewa n'etiti ahia na ahia bu ihe ojoo - ma o ziri ezi!
Ikike inyocha ihe ọzọ ha zụtara n'ịntanetị na-abịa ohere maka ndị ọkachamara n'ahịa ka a hụ ha ma tinye aka ebe onye zụrụ ahịa na-achọ ozi. Ndị ọkachamara na-ere ahịa nke na-eji ike ọdịnaya eme ihe ma na-ewulite ikike nke aka ha na oghere ha na-enweta nnukwu nsonaazụ. Gingde blọgụ, mgbasa ozi mmekọrịta, ohere ikwu okwu, na ịkparịta ụka n'ahịa bụcha ụzọ dị iche iche ndị ahịa ga-esi gosipụta ikike ha iji nye atụmanya ahụ uru.
B2B Ahịa, Ndị na-azụ ahịa na Atụmatụ Na-ere Ọha
Buru ebe onye zụrụ ya nọ - LinkedIn, Twitter, Facebook Groups, na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ bụcha nnukwu saịtị ntanetị ebe ndị ọkachamara n’ahịa nwere ike ịchọta ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ wuo ezigbo aha.
Nye uru, wulite ntụkwasị obi - Idozi ọdịnaya, ịza ajụjụ, na inyere ndị na-azụ ahịa aka (ọbụlagodi na ngwaahịa na ọrụ gị) ga - enyere gị aka ịme ntụkwasị obi.
Uru + ịtụkwasị obi = ikike - Inwe aha maka inyere ndị ọzọ aka mere ka ị bụrụ ezigbo ahịa ahịa. Ndị ahịa B2B achọghị ka ha na onye na-ere ahịa mechie, ha chọrọ ịchọta onye ọlụlụ ga - enyere aka azụmaahịa ha aka.
Ikike na-eduga n'ịtụkwasị obi - Ntụkwasị obi bụ ntọala onye ọ bụla na-azụ B2B na-eme mkpebi ha. Tụkwasị obi bụ isi ihe na ohere azụmaahịa ọ bụla n'ịntanetị na ọ bụkarị ihe mgbochi ikpeazụ na mkpebi ịzụta.
Ntụkwasị obi na-eduga n'ịtụle - Ozugbo ị zụlitere ntụkwasị obi onye na-azụ ahịa, ha ga-erute mgbe ha hụrụ na ị nwere ike inyere ha aka.
Idetụle na-abịaru nso! - Ọ bụla nnukwu ahịa ọkachamara dị chọrọ ohere ka a tụlee ka ha wee nwee ike na-enwu gbaa na-abịaru nso.
Enwere ọtụtụ okwu gburugburu ahịa mgbanwe na ahịa ahịa. Ma ngbanwe a sitere n’otu ihe dị mkpa: ihe onye zụrụ. Peoplezọ ndị mmadụ si azụrụ ngwaahịa na ọrụ ntanetị agbanweela nke ukwuu kemgbe afọ - ma n’oge a, ndị na-azụ ahịa nwere ike karịa mgbe ọ bụla. Iji ghọtakwuo banyere ihe na-emetụta ndị ahịa nke oge a, anyị edebela akwụkwọ ozi nke na-ekpughe mkpali ha. Kedu ụdị ọdịnaya na-emetụta ndị na-azụ ahịa karịa? Nye ka ha tụkwasịrị obi? Kedu ngwaọrụ ndị ị kwesịrị iji mee ka usoro ịzụta dị mfe? - Jose Sanchez, Ahịa maka Ndụ.
Ndị mmadụ na-azụta n'aka ndị isi chere echiche bụ ndị a na-ahụ anya ebe onye na-azụ B2B na-achọ ozi ma nye ozi onye na-azụ ahịa na-achọ. Ndị ahịa gị ọ dị ebe ahụ?
Tags: b2bb2b ndị na-azụ ahịab2b elekọta mmadụ na-ereahịa mgbasa oziotu ahiana-elekọta mmadụ na-ere
Tinye n'ọrụ Ahịa Prioritization Emebi Gị Your Outbound Sales tọghatara
Otu esi agba ọsọ ule A / B na peeji nke ọdịda gị